Indlu yemithi, iCrayfish Bay Organic Estate - I-Airbnb
Indlu yemithi, iCrayfish Bay Organic Estate
Ifama sinombuki zindwendwe onguLylette & Kim
ULylette & Kim yi-Superhost
Indlu entle yokulala emi-2 enembono engakholelekiyo yeCaribbean ekumgama wemizuzu emibini kuphela.I ''iNdlu yoMthi'' ibekwe ngaphezulu kwendlu yezindlu. Inamagumbi okulala amabini aneebhedi zobukhulu bokumkanikazi, igumbi lokuhlambela kunye nebalcony enkulu kakhulu ebandakanya ikhitshi elinomoya ovulekileyo kwaye isetyenziswa njengendawo yokuhlala gabalala.
Iimbono zintle ngokutyalwa kwekoko kunye nehlathi kumacala amabini kunye nombono opheleleyo weCaribbean kwamanye amabini.
Ngoku eCrayfish Bay Organic Estate sibonelela ngendawo yokuhlala kwabo bangathanda into eyahlukileyo kwiholide yesiqhelo yaselwandle. Ngokuphuma kwayo kwingoma ebethiweyo kunye nokubuyela kwisiseko somoya ibonelela ngamava ayinyaniso eCaribbean.
Igqitywe ngoFebruwari ka-2018, i-Tree House, ethe ngcu phezulu kumzi-mveliso wetshokolethi iCrayfish Bay Organics encinci kunye nendlu yasefama, inika impepho ezihlaziyayo zokuphila kamnandi kunye neembono ezibambekayo kuzo zombini iiCaribbean, okumgama nje wemizuzu emibini ukusuka, kunye ne-cocoa estate esebenzayo. .
Kukho indawo yokuhlala abantu ukuya kuthi ga kwabane kumagumbi okulala amabini, omabini aneebhedi ezinobukhulu bokumkanikazi, igumbi lokuhlambela kunye nebalcony enkulu kakhulu ebandakanya ikhitshi elinomoya ovulekileyo kunye nendawo yokutyela ephumlayo kunye neendawo zokuhlala.
Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ngesitovu segesi kunye nefriji encinci.
Indlu yoMthi ingqongwe yimithi yeziqhamo emininzi eyahlukeneyo...ziveni nikhululekile ukuba nizincede kuyo nantoni na ekwixesha lonyaka.
4.88 · Izimvo eziyi-75
ICrayfish Bay ikumNtla Ntshona weCaribbean kuNxweme lweSiqithi saseGrenada, eWest Indies, kude kakhulu neendawo zabakhenkethi eziqhelekileyo.
Yonakaliswe kanobom yiNkanyamba u-Ivan ngo-2004, oku kurhoxa kubi kuye kwabuyiselwa ngothando kule minyaka ilishumi (10) idlulileyo kwaye ngoku ibuyiselwe ngokupheleleyo njenge-organic cocoa estate enefektri encinci yetshokolethi. Le ndawo inezindlu zangasese ezimbini ezibonelela ngendawo yokuhlala yokuzenzela abantu abapakisha ngasemva, abakhenkethi abakhenkethayo, abathandi bendalo kunye nabathanda itshokolethi.
Ngexesha leNkulungwane ye-17 ilifa lalisaziwa ngokuba yi-"Non Pariel" elithi xa liguqulelwe lithethe-njengelingenakulingana okanye elingenangqamaniso. I-Non Pariel yayiyindawo yeFactory enkulu yaseFransi iMolasses kwaye amanye awo amabhodlo kunye nezinto zakudala zisabonakala nanamhlanje.
Ngenkulungwane ye-18 i-Non Pariel yaba phantsi kolawulo lwaseBritane yaze yabizwa ngokuba yiCrayfish Bay kwaye yaba yindawo esebenzayo yecocoa.
Ilali yasekuhlaleni apho kukho iivenkile ezininzi ezincinci yathatha igama elithi NonPariel. Le lali ineevenkile zayo ezincinci nabantu abanobuhlobo kukuhamba imizuzu nje embalwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Lylette & Kim
ICrayfish Bay iqhutywa ngabantu abaxubeneyo. UKim, indoda eliNgesi eyahlanjwa eSiqithini kwiminyaka engamashumi amabini anesithandathu eyadlulayo, uLylette, iqabane lakhe elalicinga kakhulu, kunye noGabri, indoda yalapha ekhaya elawula kwicala lobomi bokulima.
Sonke siyavuya kakhulu ukusebenzisana neendwendwe kwaye sichaze ukusebenza kunye nembali yefa ... .. ngokuqhelekileyo phezu kwebhiya ebandayo kusihlwa.
ICrayfish Bay iqhutywa ngabantu abaxubeneyo. UKim, indoda eliNgesi eyahlanjwa eSiqithini kwiminyaka engamashumi amabini anesithandathu eyadlulayo, uLylette, iqabane lakhe elalicing…